Naya Post Nepal | यस्तो अ’नौठो जोडी ! विवाह भएको यत्रो वर्ष भयो अहिलेसम्म एकअर्कालाई देखेका छैनन् (भिडियो हेर्नुस्)
यस्तो अ’नौठो जोडी ! विवाह भएको यत्रो वर्ष भयो अहिलेसम्म एकअर्कालाई देखेका छैनन् (भिडियो हेर्नुस्)
बाटोमा बसेर मिठो गित गाउदैँ आएका विष्णु नेपाली र दिपा नेपाली दुबै दृ’ष्टिवि’हीन छ्न । ७ वर्ष अघि उनिहरुले बिबाह गरेका हुन । बि बाह गरेको ७ वर्ष हुदा पनि उनिहरुले एक अर्कालाई देख्न भने पाए का छैनन । तर पनि आफुहरुको माया भने धेरै भएको उनिहरु बता ‘उँछन ।
अहिले दिपा ३३ वर्षकि छिन भने बिष्णु २९ वर्षका भए । दिपा र बिष्णु दुबै जना आँखा नदेख्ने भए पनि उनिहरु स्वर भने निकै राम्रो छ । उनिहरु सडकमा बसेर आधु’निक तथा लोक गितहरु गाएर आ फ्नो दैनिकी च’लाउदै आएको उनिहरुले ब’ताएका छ्न ।
प्राय जसो आफुहरु आफ्नै जिवनमा मेल खाने गितहरु बनाएर गाउ ने गरेको दिपाले बताएकी छिन् । दिपा र विष्णुले गित मा’र्फत नै आ फ्नो क’था अरुलाई सु’नाउने गरेका छन । विशेषत अपाङ्गहरुसगँ मि ल्ने जुल्लने गित आफ्नै मौलिक शब्दमा गाउने गरेको वि’ष्णुको भना इ छ ।
उनिहरुको घरमा आमा, बुवा, बहिनी आफूहरु २ जना रहेको बिष्णु ले बताएका छन् । तर आफुहरु अहिले फ’ल्टै अर्को एउटा सानो घर भएको र त्यसैमा बस्दै आएको उनिहरुले ब’ताएका छन । आफुहरु दुबै जनाले मिलेर खाना प’काउने गरेको वि’ष्णुले बताउँछन ।
आफुहरु अहिले बसिरहेको स्थानामा समयमा सवारी साधन नपाउने हुनाले नि’कै गा’र्‍हो हुने गरेको उनिहरु ब’ताउँछन । आफुहरुको दैनि की नै सडकमा गित गाएर चल्ने हुदाँ घरबाट बाहिर जादाँ समयमा बस नपाउने उनिहरुको भनाई छ । करिव आधा घन्टा पैदल हिडेप छि मात्र गाडी लाग्ने ठाउँमा पुगिने हुनाले आफुहरुलाई केही स’मस्या भएको उनिहरुले बताए ।
आँखा नदेख्नु सगँसगै अहिले अन्य ३/४ वटा रोगले पनि स’ताए प छि आफुहरुलाई अझ गा’ह्रो भएको दिपाले बताइन् । आफुहरु दुबै को जन्मिदा देखि नै आँखा नदेख्ने भएको उनिहरुले ब’ताएका छन । अन्य काम गर्न न’सक्ने भए पछि बाटोमा गीत गाएर ब’स्नु पर्ने उ निहरु बताउँछन । अहिले आफुहरुले दैनिक ८/९ सय गित गाएर कमाउने गरेको दिपाले बताईन ।
७ वर्ष अघि पढ्न जादा दिपा सँग भेट भएको विष्णुले ब’ताएका छन् । परिक्षा दिने हलमा दिपाको आवाज सुनेपछि आफुलाई मन परेको विष्णुले ब’ताए । आफुलाई माया गर्ने तिहारमा टीका लगाइदिने एक जना दिदिलाई यो केटि सँग बिहे गर्ने पाए जिन्दगीमा केही गर्ने स’कि न्थ्यो कि भनेर आफुले दिदिलाई भनेको विष्णुले बताएका छन् ।
आफुले दिदिलाई कुरा राखे पछि तिनै दिदिले आफुहरुको कुरा मिला इ दिनुभएको बिष्णु बताउँछन । दिदी मा’र्फत कुरा हुँदै गए पछि आ फुले दिपालाई बिबाहको प्र’स्ताव राखेको बिष्णु बताउँछन । तर त्यो बेला दिपाले रोगीआफु भएकोले बि’बाह न’गत्ने बताएको वि’ष्णु सु नाउँछन ।
आफुले अब दुबै मिलेर बसौं, रोग बिनाको मान्छे कोहि नहुने भने पछि दिपाले पनि स’हमती जनाएको उनले ब’ताए । दुबैको सहमति मा आफुहरुले मागेर बिहे गरेको वि’ष्णुको भनाई छ । आमा रोगी भएकोले आफू गर्भमा भएको बेला औ’षधि धेरै प्रयोग गरेकोले आफू यस्तो भएको दिपाको भनाइ छ ।
२०७८ माघ ८, शनिबार प्रकाशित 1 Minute 148 Views